Sei Dhijitari Kutungamira Kubata kuri Kuchinja | Martech Zone
Muvhuro, October 24, 2016 Muvhuro, October 24, 2016 Muhammad Yasin
Kutungamira kubatwa kwave kuripo kwechinguva. Sezvineiwo, ndiwo mabhizinesi mangani anokwanisa kuwana bhizinesi reGET. Vatengi vanoshanyira webhusaiti yako, vanozadza fomu vachitsvaga ruzivo, iwe unotora iwo ruzivo uye wozovafonera. Zvakareruka, handiti? Ehh… kwete zvakanyanya sekufunga kwako.
Iyo pfungwa, mukati uye yega, yakapenga yakapusa. Mukufungidzira, inofanirwa kuve yakanyanya kukurumidza kutora anotora akawanda anotungamira. Zvinosuruvarisa, hazvisi. Kunyangwe zvingave zvaive nyore nyore makore gumi apfuura, vatengi vava kutya zvakanyanya pamusoro pekusiya ruzivo rwavo. Iko kufungidzira ndekwekuti ivo (mutengi) vari kuzopinza ruzivo rwavo muchimiro (nechinangwa chekuwana ruzivo) uye ivo vanozopomberwa nefoni, mae-mail, zvinyorwa, tsamba yakananga uye zvichingodaro. Kunyangwe iyi isiriyo nyaya yemabhizinesi ese, vamwe vane uye vachabhomba tarisiro nezvipiwa izvi - uye zvinosemesa zvikuru.
Izvo zvataurwa, vashoma uye vashoma vatengi vari kuzadza static lead mafomu.
Zvino, kana ndikati static lead mafomu, ndinoreva mafomu mafupi ane angangoita 4-5 nzvimbo yeruzivo rwako (zita, nhamba yefoni, email, kero, nezvimwewo) uye pamwe chikamu chemashoko chekubvunza mubvunzo nekukurumidza kana kupa mhinduro. Mafomu acho haawanzo kutora toni yenzvimbo pane peji (saka ivo havasi vanoshamisira), asi ivo hapana chavanopa cheicho chinooneka kukosha kumutengi kana.
Kazhinji, vatengi vari kuzadza ruzivo rwavo kuti vakwanise kuwana rumwe ruzivo (kubva kubhizinesi) gare gare. Kunyange paine pasina chakanyanya kukanganisika nemamiriro ezvinhu aya, iyo yekuwedzera ruzivo iyo inokumbira mutengi inopedzisira yave kuita yekutengesa. Kunyangwe kana mutengi achigamuchira ruzivo rwavakakumbira, vangangodaro vasingade kutengeswa kune izvozvi - kunyanya kana vachiri muchikamu chekutsvaga.
Static lead gen mafomu achiri kutenderera, asi ivo vari kukurumidza kufa kuti vagadzire nzira dzedzakawanda nzira dzekushanduka kwedhijitari inotungamira chizvarwa. Mafomu ekutungamira echizvarwa (kana mapuratifomu pane) ari kuve akareruka uye epamberi kuti agone zvinodiwa nevatengi - zvichipa vatengi chikonzero chekupa iro bhizinesi ruzivo rwavo. Heano maitiro ekutungamira kwedhijitari kutora:
Tungamira Gen Mafomu ari Kuita "Inopindirana" uye "Kubatikana"
Static lead mafomu ndeaya chete: ivo kunofambira mberi. Havasi kukwezva; uye kutaura chokwadi, ivo vanoita kunge vanofinha. Kana ichitaridzika seinofinha (kana zvakatonyanya, haitarisike zviri pamutemo), mukana wevatengi kuzadza ruzivo rwavo ishoma. Vatengi havangodi kufunga kuti chimwe chinhu chinotonhorera kana chinonakidza chiri kuuya kwavari (uye kana zvese zvikajeka uye zvichipenya, zvinogona kunge zviri izvo), ivo vanoda kuve nechokwadi chekuti ruzivo rwavo harusi kutengeswa kumapato echitatu kana kushandiswa zvisiri pamutemo. Vanoda kuziva ruzivo rwacho rwuri kuenda kuna ivo vanoti rwuri kuenda.
Chimwe chezvinhu zvikuru zviri kuitika kutungamira mafomu ndechekuti ivo vari kuve vanotsvedza, inofambidzana uye inobata zvakanyanya.
Panzvimbo pechimiro chinokumbira ruzivo rwakareruka rwekubatana, mimwe mibvunzo iri kubvunzwa - uye kudzivirira kufinhwa, iyi mibvunzo iri kuunzwa nenzira dzakasiyana.
Mabhizinesi mazhinji atanga kushandisa ekudonhedza mamenu, sarudzo dzakawanda, uye kunyangwe iwo chaiwo mavara anozadza kuona kuti mutengi anogara achivaterera. Pamusoro pezvo, mafomu ekutungamira ari kuve anochinja zvakanyanya, uye mabhizinesi ave kugona kubvunza mibvunzo ingave inonakidza kumutengi. Panzvimbo pekunzwa sekushandisa, iyi fomati ichango shanduka inonzwa sekuzadza chimiro - icho chinogona kutumirwa kumutengesi uyo anozovabatsira pane kuti avatengese.
Vatengi Vari Kupihwa Chaicho Kukosha
Kana iwe ukadzokera kumashure nepashoma semakore mashanu, iwe ungangodaro uchayeuka kuti mazhinji mafomu anozadza dzaingova nzira dzekuti iwe ubvunze rumwe ruzivo. Iwe waizoisa mune yako yekudyidzana ruzivo, pamwe rumwe ruzivo rwekufarira, iwe wairova pasi uye unomirira kuti mumwe munhu akubate iwe Dzimwe nguva unenge uchinyorerwa tsamba yemwedzi kana chimwe chinhu chakafanana - asi chaizvo, hapana chakakosha.
Nekukurumidza kumberi iyo makore mashanu, uye isu tave kuona kuti pamwe nemafomu emhando yepamusoro anoenda, kuzadza mafomu epamberi kwave kuita kuchinjanisa. Panzvimbo pekuwana mhinduro senge "Maita basa nekuendesa fomu renyu. Mumwe munhu achasvika nekukurumidza, ”vatengi vanorapwa ipapo ipapo kune zvigadzirwa / sevhisi zvinopihwa, mitengo, uye muzviitiko zvakawanda sekupedzisira, mhedzisiro yekuongorora!
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo vashanyi vewebhusaiti vari kutarisira kutora mibvunzo uye kuzadza ongororo.
Muenzaniso wakanaka weizvi ungangove "Ndeipi mhando yemota yakakunakira?" kuongorora. Iyi ndiyo mhando yekutarisa yataigona kuzviona isu tichipa kune vedu vatengi vemotokari nechinangwa che kugadzira kutsva kwemotokari kutungamira. Mune ino ongororo, mutengi anopindura mimwe mibvunzo nezve kwavo kutenga / kutyaira zvavanofarira. Kamwe pavachaendesa mhinduro dzavo, zvawanikwa zvinobva zvagadzirwa kwavari. Kuti vaite izvi, hongu, ivo vanofanirwa kupa yavo yekuonana ruzivo. Kana mutengi achida kuziva zvakakwana (uye isu tiri kutarisira kuti vari), ivo vanozoisa muemail yavo, uye ivo vanowana mhedzisiro yavo.
Panzvimbo pekupa uye kutora mhando yemamiriro ezvinhu, mafomu ekutungamira ave anowirirana; zvichikonzera kuenzana kwakaenzana pakati pemutengi nebhizinesi.
Kana mutengi akazadza iyo "Ndeipi mota yakakunakira?" Ongororo uye voti vane mhuri hombe, vanogona kuwana voucha kuti vaedze kutyaira yakatarwa minivan. Kana, zvirinani zvakadaro, vanogona kuwana kupihwa kamwe kwe $ 500 kubva pamota yemhuri. Kana zvasvika pakupa kukosha kune vatengi, mikana yacho inenge isingaperi.
Iine tekinoroji inovandudza nekukurumidza sezvazviri, vazhinji vanotungamira mafomati vanopa vanogona kungoerekana vatora ruzivo rwekuti vatengi vapinde mune inotungamira fomu uye vorishandura rive chipo chinonyanya kukoshesa mutengi. Mafomu ekutungamira haachisiri sezvavaimbove. Ivo vakashanduka kuita chimwe chinhu chakakura kwazvo kupfuura icho vazhinji vashambadzi vangave vangadai vakafungidzira. Sezvo lead lead tekinoroji iri kuramba ichivandudza nekushanduka, mabrand anofanirwa kushandura yavo yekutungamira yekubata maitiro futi!
Tags: kuongorora kwevatengimutungamiriri anotungamira kutoradigital lead kubatwazvinowirirana zvemukatizviitiko zvekudyidzanainopindirana inotungamira kubatwainternet lead kubatwalead kubatwa